आजको राशिफल ! कारोबार गर्दा यी राशिहरूले सचेत रहनुपर्ने - नेपाल कुरा
आजको राशिफल ! कारोबार गर्दा यी राशिहरूले सचेत रहनुपर्ने
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०७७, सोमबार April 5, 2021 , संवाददाता: Yukta
छोटो यात्राको योग छ । साथीभाईको जमघट हुनेछ । आम्दानी बढे पनि अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुँदा बचत हुनेछैन । बोली विपरितको अर्थ लाग्दा प्रेममा मनमुटाव हुन सक्छ । कारोबार गर्दा सचेत रहनुहोला ।
रोकिएका काम अघि बढ्न सक्छन् । आफ्ना योजना गोप्य राख्दा राम्रो हुनेछ । साथीभाईसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । अध्ययनमा सफलता मिल्ला । कारोबार गर्दा सचेत रहनुहोला ।
स्वास्थ्य प्रतिकूल हुनेछ । अनाव्यकरूपमा खर्च बढ्नेछ । सोचेको काम अघि नबढ्दा दिक्दारी लाग्नेछ । मन चञ्चल हुनेछ । कुनै पनि काम गर्नअघि सोचविचार र गोप्य ढंगले गर्नु होला । मुद्दा मामिला आइलाग्ला । सरकारी निकायको भय हुनेछ । ज्योतिष एस्ट्रो राज
प्राकृतिक रुपमा फोक्सोलाई सफा गर्न अपनाउनुस् यी सहज तरिका
यौन सपना किन देख्ने गरिन्छ ?
साइकल चढ्नाले पुरुषको यौन स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?